Falanqaynta Ganacsiga - VANTAGE | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ku hawlgal waayo-aragnimo adduun-weyne ka ah meherad ganacsi oo baahi weyn leh. Ardayda waxay ku qaataan labada simistar iyagoo ka shaqeynaya dhowr mashruuc oo warshado wadata, xallinta dhibaatooyinka ganacsi ee xudunta u ah iyo barashada barashada abaalmarinta shaqada mashruuca ku saleysan.
Ayadoo la isticmaalayo Excel iyo Tableau, ardaydu waxay falanqeeyaan oo tarjumi doonaan macluumaadka tusale ahaan darawal muhiim u ah horumarinta istiraatiijiyad ganacsi oo wax ku ool ah. Ardeydu waxay baarayaan qaababka tirakoobka sida tusaalooyinka muunad ahaanta, falanqaynta cabudhinta iyo hanaanka soo gelitaanka ka dibna waxay si toos ah ugu adeegsadaan xogta dhabta ah iyo macluumaadka ganacsiga ee ku habboon. Waxay bartaan sida loo dhiso moodooyinka saadaalinta ganacsiga ee ku saleysan hababka falanqaynta waxayna la shaqeeyaan hogaamiyaasha wershadaha falanqaynta xogta sida Nielsen, Centriam iyo Best Buy si ay u fahmaan sida xogtu u hagaajiso waxqabadka ganacsiyada casriga ah. Barnaamijkan waxaa lasiiyaa dhalinyarada iyo waayeelka.
Sanad-sanadka oo dhan, koorsada laba-amaahda ah ayaa kasbatay:
Tirakoobka AP (hal dhibic xisaabta)
Maareynta Ganacsiga ee IB ama HL (hal qadarka doorashada)
Soo degso Buugga VANTAGE